Articles tagged 'diaspora'
ZB, Zympay launch digital fees payment platform 6 July 2018 HARARE - ZB Bank (ZB) has teamed up with United Kingdom-headquartered cross-border payments enabler, Zympay, to facilitate digital payments for school fees both locally and from the Diaspora. ZB Financial Holdings Limited chief executive Ronald Mutandagayi said the initiative, which was launch...
Football connects Diaspora with Zimbabwe 12 June 2018 HARARE - A progressive football tournament dubbed the Flexi Cup Summer Festival is on in Coventry, England next weekend to showcase the abundant Zimbabwean talent in the Diaspora that the country can tap into. The tournament which is in its third year running is also aimed at helping charity...
Diaspora to petition for Zim vote 19 April 2018 HARARE - The US-based Zimbabwe Diaspora for Democracy Inc. and the South Africa-based Zimbabwe Exiles Forum (ZEF) is petitioning government against it's decision to bar expatriate Zimbabweans from voting from their foreign bases in the forthcoming key 2018 vote. The two organisations, represen...
'Diasporans won't vote from outside Zim' 7 July 2017 HARARE - Zimbabweans based outside the country will not be able to vote in next year's watershed elections, national elections management body — the Zimbabwe Electoral Commission (Zec) — said yesterday bringing to an end the debate on whether those in the Diaspora would be allowed to be part of t...
Protest over Diaspora vote 5 June 2017 HARARE - Zimbabwean civil society organisations (CSOs) are planning to stage a protest over the Diaspora vote, as they up pressure on President Robert Mugabe's government to allow foreign-based citizens to vote in next year's elections. The demonstration will be held in neighbouring South Afri...
Diaspora remittances overtake FDI 20 December 2015 HARARE - Diaspora remittances to Zimbabwe have overtaken foreign direct investments (FDI) due to the country's controversial economic policies that continue to push foreign investors away, latest data from Treasury shows. Figures released by the Finance ministry this week revealed that Diaspor...
Zim targets $2bn diaspora remittances 21 August 2015 HARARE - Zimbabwe is targeting $2 billion in Diaspora remittances into the national payment system by year end according to the central bank Diaspora remittances subsidiary, Homelink (Pvt) Ltd (Homelink) board chairman, Morris Mpofu. Speaking at a Homelink strategic business unit (SBU) housing...
Diaspora most viable exports 22 July 2014 HARARE - Last week, both President Robert Mugabe and his deputy Joice Mujuru addressed the issue of Diasporans, the former, chiding them for leaving their own country, and the latter imploring them to return and help “rebuild” Zimbabwe. Mugabe sounded aggrieved that the Zimbabwean migrants had...
Few locals living abroad trek home to vote 1 August 2013 HARARE - If Zimbabwe's election delivers a win for the party he supports, Gilbert Zondo could be back home by the end of the year, reviving the teaching career he abandoned five years ago to live in precarious exile in South Africa. “It would be nice to stand in a classroom again and do the jo...
Con-Court defers ruling on Diaspora vote 15 June 2013 HARARE - A ruling on an application by a South Africa-based man who had approached the Constitutional Court demanding that Zimbabweans in the Diaspora vote in the forthcoming poll has been indefinitely shelved. The application by Tavengwa Bukaibenyu, a professional driver, was expected to be hear...
Zim ordered to allow Diaspora vote 13 March 2013 HARARE - Zimbabweans in the Diaspora must be given voting rights in the forthcoming referendum and watershed elections, the African Commission on Human and Peoples Rights (ACHPR) has ruled. The ACHPR has directed the government to allow Zimbabweans living abroad to vote in the March 16 referendum...